Xarun-dhul oo dhan oo leh dhammaan kuraasta aad ugu baahan tahay Macbook | Waxaan ka socdaa mac
Wadada ka baxsan wadada ee loogu talagalay MacBook Pros
Laptops-ka Apple ee ku jira MacBook iyo MacBook Pro kala duwan waxay leeyihiin oo kaliya dekedda USB-C si ay ugu xirmaan aagagga dibadda, marka maanta waa inaan leenahay adapters waxyaabo badan oo mashruucyaduna yihiin HDMI ama VGA, qalin wadayaal badan ayaa ah USB-A, kaararka SD iyo microSD waxay leeyihiin qaab kale, codka maqalka ee 3.5mm ama dekedda ethernet, xiriirkooda astaamaha.
Marar badan oo kale ayaan ku tusnay adapters-ka noocaan ah laakiin aad u isafgarad badan, adapters-ka oo aan ku heli karno xiriirro badan dekedda USB-C. Xaaladdan oo kale waa adabtarad aan annaga innaba annaga waxba noogu jirin laakiin xaaladdan oo kale waxay leedahay cabbir ka ballaadhan isla mar ahaantaana waxaa loo isticmaali karaa wiish ahaan laptop-ka laftiisa. ugaga tag booska u janjeera dhanka isticmaale qiyaastii shan iyo toban darajo.
Hadaad ubaahantahay adabtaraha qaabkan, kan waxaad kuheli kartaa suurto gal inaad kusoohesho hal deked USB-C ah oo ah MacBookgaaga sadex dekedo oo USB-A ah, HDMI port, SD iyo microSD card slot, a VGA port, ethernet kale shabakadda iyo USB-C-kii ugu dambeeyay si aadan u lumin suurtagalnimada isku xirka durugsan ee USB-C haddii kombiyuutarkaagu yahay MacBook oo aad kaliya haysato hal dekedo USB-C ah.
Sida naqshadeeda, waa mid aad loo safeeyey oo leh meel aluminium anodized cirro leh oo cirro leh. Sida aan ku sheegnay bilowga maqaalka waa qaab qaabeed kiiskanna waxaa loo adeegsadaa adigoo hoos dhigaya laptop-ka sida aad u awoodo sawirka aan ku lifaaqnay, waxaad sare u qaadi kartaa laptop-ka illaa 15 digrii. Waxaad waxbadan ka ogaan kartaa xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Wadada ka baxsan wadada ee loogu talagalay MacBook Pros
Ma garanayo halkaad ka hesho taasi waxay kor u qaadeysaa laptop-ka qiyaastii 15º. Ugu badnaan 6-7º.
Jawaab Jose Manuel
Mophie wuxuu soo bandhigayaa bangi awood siiya nolosha batroolka ee MacBook illaa 18 saacadood
Ku hagaaji wax soo saarkaaga hab maamuuska joogtada ah ee u dhexeeya macOS iyo iOS